Mitady Anaran-tsehatra indigi Vaovao Ireo Mpikatroka Tompotany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2018 17:03 GMT
Natao anjorony sy nampijaliana nandritra ny taonjato maro, mitady fizakantena ara-aterineto ankehitriny ireo vahoaka tompotany (indizeny) – vondrom-piarahamonina teratany manerana izao tontolo izao izay matetika sokajian'ny fanjakana fa vitsy an'isa. Nentanin'ny fahafahana hamorona anaran-tsehatra ankapobeny dingana faratampony vaovao (gTLD), te hisoratra anarana amin'ny anaran-tsehatra azy ireo manokana [teboka] indigi ny mpikatroka sasany. Saingy hahavita handresy ny fanamby ara-bolan'ny aterineto ve izy ireo?
www.dotindigi.com no tranonkalan'ny fanentanana ofisialy, miaraka amin'ireo vondrona fanohanana ao amin'ny Facebook sy Google. Tarihin'ilay mpikatroka teratany Maori avy ao Nouvelle Zelande, Karaitiana Taiuru, izay notendren'ny Task Force Tompotany Iraisam-pirenena hitarika azy ny tetikasa Dot Indigi. Atoa Taiuru no voalohany namoaka ny vaovao tamin'ny 5 Febroary:
Manome antsipirihany bebe kokoa momba ny tetikasa ny Indigenous People's Issues Today :
Singing to the Plants manazava ny dingana:
Noho ny saram-pisoratana anarana mitentina 185.000 dolara – dia ny vola no mety ho olana lehibe indrindra amin'ity fanentanana ity, hoy ilay mpanolo-tsaina Antony Van Couvering:
Tantaran'ny Nouvelle Zelande farany
21 Novambra 2019Oseania
01 Novambra 2019Aostralia